rakaab kii degay diyaarad
Su'aal rakaab kii degay diyaarad
sano 2 4 bilood ka hor #272 by Colonelwing
Whitechapel rakaabka kuwaas oo degay diyaarad!
Man matalo Diyaarad yar, oo uu saaxiib ka dib markii duuliyihii ayaa Heartattack a
sano 2 4 bilood ka hor #277 by Dariussssss
Whoa, oo intaasu waxay ahayd mid aad u weyn. Si wanaagsan baad yeeshay.
sano 2 4 bilood ka hor - sano 2 4 bilood ka hor #281 by Colonelwing
rakaabka waa in la reconize sidii nin geesi ah ,, Waxaan la Lt SAR ku heshiin!
Waxa uu sii aad u deji sida habeen dayrta ,, waa totaly cabsi badan in la arko sida badan uu doonaynin
leeyihiin argagax leh formation ka soo duulaya habboon ee gacanta
Last edit: 2 sano 4 bilood ka hor by Colonelwing.
sano 2 4 bilood ka hor #282 by Dariussssss
Isagoo ka hadlayay of argagax, waxaa jira duubo ATC ku KSHA, sahlan looga heli karo. Guy waa wax yar, sida Cessna duulaya, oo ka mid ah meel galaa edegga ku xun, iyo FREAKS KA. Dhulku qosol. Iyo, haa, isagu waa tijaabo ah.
sano 2 4 bilood ka hor #283 by Colonelwing
Waxaan qabaa in aan garanayo oo aad tilmaanta at ,,, sameeyey arkay in mid ka mid Waxaan qabaa ...
adiga iyo waxaan Betwen ,, in mustaqbalkeyga waqti la ii yaaban sida qaar ka mid ah dadka rayidka ah helay ruqsada gaarka ah
oo kaalay sida ay duulaya hawada la mid ah ay gacanta ku sida aan ku jiray. weli Its kor ii wada gariiri
kaliya inaan ka fekero waxa ka mid ah ...
sano 2 4 bilood ka hor #290 by Gh0stRider203
kaliya wow .... run ahaantii la yaab leh!
sano 2 4 bilood ka hor #291 by Dariussssss
Halkan, waxaan leenahay ku hadlaysaan '' Ko ti dade vozacku '' ..in translation..well ugu wanaagsan ee suurto gal ah is- '' Yaa cadaabta aad siisay ruqsad in? '', Waxana aan qabaa, waxa ay sheegtay in wax badan.
sano 2 4 bilood ka hor #295 by Colonelwing
Good mid Dariussssss ,,, halkan hadalkii jir noqon lahaa ,,, waxay u helay hadiyad ahaan ka soo box CrakerJACK ah ,,,
Gh0stRider203 ,,, haa yaab ,, ama nooc ka mid ah mucjiso hab ...
U muuqdaan sida saaxiibkiis (ku yahan pilot dhintay) qaaday daryeel isaga oo sameeyey caawin isaga si nabad ah u hesho diyaarad this dhulka ku.
ma ogaan doonaa ,,, laakiin hal wax oo waa wanaagsan yahay, hubaal ,,, ka dib dhacdadan aan dheer go a gentelmen this bilaabay
tababarka liisanka pilot Private. wax aad u wanaagsan A waxaan idinku leeyahay.
sano 2 4 bilood ka hor #329 by Gh0stRider203
haa, waxaan su'aal la'aan lahaa inaan halkaas ku heshiiyaan, Colonel